Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. यस्तो छ शनिबार देखिएको ‘अनौठो जहाज’को वास्तविकता – Emountain TV
काठमाडौं, ८ मंसिर । शनिबार एक जहाजले काठमाडौंको आकासमा धुवाँ फाल्दै उड्यो । कतिपयले यसलाई अनौठो मानेर हेरे भने केही सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय पनि बन्यो ।
यो जहाजलाई भारतीय लडाकु बिमान वा जासुस बिमान हुन सक्ने अड्कल पनि कतिपयले गरेका छन् । तर, विज्ञहरुका अनुसार आकासमा कलात्मक देखिने गरी धुवाँ फाल्ने जहाजको विषय अर्कै हो ।
आकासमा यसरी देखिने जहाजको पुच्छरजस्तो आकृतिलाई ‘कन्ट्रेल्स’ भनिन्छ । हरेक जहाज इन्जिनको सहायतामा उड्छ । जहाजको इन्जिन पनि गाडीको इन्जिनजस्तै इन्धनको सहायतामा चल्छ र धुँवा निस्कन्छ । सामान्यतया तातो हावा रहेको आकासमा उडिरहँदा वा जमीनबाट नजिक उड्दा धुँवा देखिदैन ।
तर, जति माथि जहाज गयो, त्यति नै वातावरण चिसो हुँदै जान्छ । प्रति १ हजार फिट उचाइमा २ डिग्री तापक्रम घट्छ । लामो दूरीमा यात्रा गर्ने जहाजहरु ३५ हजार फिटसम्मको उचाइमा उड्छन् ।
नेपालमा आन्तरिक जहाजहरु १ हजारदेखि १७ हजार फिटसम्मको उचाइमा मात्र उड्ने गर्छन् । काठमाडौंमा अवतरणका लागि आएका अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पनि नेपालमा छिर्दा तल झरिसकेका हुन्छन् । ‘काठमाडौंमा अवतरण नगर्ने तर नेपालको आकास हुँदै उड्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाजले चाहिँ धुवाँ फाल्दा कलात्मक आकृति देखिने गर्छ ।
जब आकासको तापक्रम अत्यन्तै कम हुन्छ, जहाजले नियमित उडानकै दौरान फाल्ने धुँवा चिसो मौसमका कारण बाहिर निस्कनासाथ जम्छ र पानी बन्छ । जसले गर्दा जहाजको पुच्छरजस्तो आकृति बन्छ । यही आकृतिलाई धेरैले अनौठो जहाज, जासुस जहाज वा लडाकु जहाजका रुपमा चित्रण गर्छन् ।